अमेरिकाले यसरी गरेको थियो गद्धाफीको हत्या, यी देशहरुले गरेका थिए सहयोग
सन् २०११ को अप्रिलमा वल्र्ड बैंकका प्रमुख रोबर्ट ब्रुस जौयलिकले एक प्यानल डिसकसनमा लिब्याको पुन निर्माणका लागि वल्र्ड बैकको ठुलो भुमिका रहेको र अन्य देशहरुलाई समेत सहयोग गर्न भनेका थिए ।
उनले भनेका थिए,‘पुन निर्माण भनेको आइबेरी कोष्ट, यसको अर्थ अहिले दक्षिण सुडान, यसको अर्थ लाइबेरिया, यसको अर्थ श्रीलंका, मेरो आशा यो लिब्या हुनेछ ।’
सामान्य मानिसहरुलाई लागेको थियो कि विश्व बैंकले असफल देशको उद्धारका लागि काम गर्न आइरहेको छ तर अर्थविद् जोन पर्किन्सलाई लागेको थियो विश्व बैंक आफ्नो स्वार्थका लागि जे पनि गर्न सक्छ । सत्यता अर्को थियो । अमेरिकाको अदृश्य शक्ति हो विश्व बैंक । आइएमएफ अर्को भातृ संगठनभन्दा फरक नपर्ला ।
विश्व बैंकमा अमेरिकाको १६ प्रतिशत नियन्त्रण रहेको छ । दोस्रो रहेको जापानको ७ प्रतिशत रहेको छ । अमेरिकाका यही कारण १७ प्रतिशत भोटिङ राइट इन्टरनेशनल मोनेटरी फण्डमा रहेको छ । यी संस्थाहरु अमेरिकी विदेश नीति विश्वभर फैलाउन निर्माण गरिएका हुन् ।
लिब्या एउटा ‘दुष्ट’ देश थियो । तर के गद्धाफीको दिमागमा के चलिरहेको थियो, यो प्रश्नले आज पनि उत्तिकै उत्तरहरु खोजी रहेको छ ।
आइएमएफका अनुसार लिव्यामा सत प्रतिशत राज्यद्वारा नियन्त्रित लिव्या सेन्ट्रल बैंक रहेको थियो । यसको जगेडा कोषमा १४४ टन सुन भएको मानिएको थियो । मुअम्मर गद्धाफीको आशा भनेको पुरै अफ्रिका र मुस्लिम देशमा सुन समर्थित मुद्रा चलाउन भन्ने थियो ।
यसले डलर र युरोलाई कडा चुनौती दिने अपेक्षा गरिएको थियो ।
सिड्नी ब्लुमेनथल, हिलारी क्लिनटन इमेलमा भएको पुष्टि गर्दै भनेका छन्,गद्धाफी सरकारसँग १४३ टन सुन रहेको छ । त्यति नै चाँदी पनि । सन् २०११ को मार्चमा यो स्टक (सभा) ‘नाइजेरिया र चाडसँगको लिव्यन बोर्डर’ सारिएको थियो । लिव्यन केन्द्रीय बैंकबाट सारिएको थियो ।’
उनका अनुसार उक्त सुन र चाँदी ७ बिलियन अमेरिकी डलर मुल्य बराबरका थिए । निकोलस सर्कोजीले लिब्या आक्रमण गर्नुको प्रमुख कारण पनि यही रहेको थियो ।
सार्कोजीले लिव्यामा आक्रमण गर्नुको प्रमुख कारणहरु
१. लिव्याको तेल उत्पादनमा ठुलो शेयर पाउने आशा
२. उत्तर अफ्रिकामा फ्रान्सको प्रभाव बढाउनु
३. फ्रान्सको आन्तरिक राजनीतिमा सुधार ल्याउनु
४. फ्रेन्च आर्मीलाई पुन विश्वको प्रमुख स्थानमा स्थापित गराउन
५. फ्रान्सका सल्लाहाकारहरुले लिव्या आफ्नो सिमा नाघेको र यसलाई नियन्त्रणमा नलिए आफैलाई खतरा हुने भनेपछि...
अमेरिका र युरोपका देशहरुलाई डर थियो कि यदी सुन समर्थित मुद्रा ल्याएमा यसले डलर र युरोलाई ठुलो खतरामा पार्नेछ । सद्दाम हुसेनसँगको युद्ध पनि तब सुरुवात भएको थियो जब उनले नयाँ युरो मुद्रालाई समर्थन दिए । डलरभन्दा पनि युरोलाई प्राथमिकता दिन थालेपछि अमेरिका र उनको सम्बन्ध बिग्रेको थियो ।
अमेरिका यस घटनापछि निकै असुरिक्षत महसुस गर्यो । सद्दाम हुसेनले नयाँ मुद्रा अनुसार तेल बेच्ने निर्णय गरेपछि अमेरिका थप तनाबमा आएको थियो । मुद्राको युद्ध पहिला देखिनै चल्दै आइरहेको थियो । अन्तत दबाब र तनाबकाबीच अमेरिकाले मध्य पुर्वमा आतंक र द्वन्द्व फैलाउने काम गर्यो ।
अफ्रिकाले एउटा स्वतन्त्र आर्थिक संरचना बनाउन खाजेको थियो, जुन कुरा पश्चिमीलाई पचेन । यसले विश्व राजनीतिमा नै ठुलो खलबल मच्चाइदियो ।
पिस फाउण्डरका मन्त्री डाक्टर जेम्स थ्रिङले भनेका थिए,‘नयाँ मुद्रा ल्याउने योजना गोप्य रुपमा गर्नुपर्छ । यदी तपाईले ल्याउने नै निर्णय गर्नु भयो भने सबैभन्दा पहिलो निशानामा समेत तपाई नै पर्नुहुनेछ ।’
यसैको नतिजा बने गद्धाफी । उनी सबैले खोजेजस्तो प्रजातान्त्रिक लिडर त थिएनन् तर उनले लिव्याका जनताको अधिकार पनि कहिल्यै खोसेनन् । उनले अफ्रिकाका अन्य देशभन्दा धेरै राम्रो जीवन जिउने वातावरण आफ्ना जनतालाई दिएका थिए । उनले मानव अधिकार पनि हनन नगरेको धेरैको दाबी छ ।